Dr. Panda's Cars, yemahara kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Nguva imwe neimwe idiki dzedzimba pinda tekinoroji pazera diki. Chikamu chemhosva, kuchidaidza icho, chiri kune vanogadzira, kune avo vakanakisa kunyorera kwavanogadzira nhare mbozha. MuIOS tinogona kuwana mushambadzi Toca Boca, seimwe yemitambo yakanakisa yekugadzira idiki. Asi haasi iye ega.
Dr. Panda mumwe wevanogadzira avo inotipa yakawanda mitambo yevana vadiki vari mumba, mitambo yakakodzera kune vadiki vari mumba. Nhasi tichataura nezve Dr. Panda's Cars application, mutambo wakagadzirirwa vana kusvika pamakore mashanu uye unowanikwa kurodha mahara kwenguva yakati rebei.
Ongorora maguta mana makuru uye kutyaira anopfuura makumi maviri mota, marori uye magwaPaunenge uchivhenekera sairini yemotokari yemapurisa, unobata mbavha ... Dzemota dzaDr Panda mutambo wekudyidzana unobvumidza vana kushandisa kwavo kufunga. Idiki diki reimba inozokwanisa kutyaira mhando dzakasiyana dzemotokari (mapurisa, vanodzima moto, mabhazi, makran ...) pavanenge vachitsvaga maguta mana uye vachitsvaga mhando dzese dzezvakavanzika mumutambo.
1 Huru maficha eDr Panda's Cars:
2 Tsanangudzo yeMota dzaDr Panda
Huru maficha eDr Panda's Cars:
4 maguta ekuongorora!
Tyaira dzinopfuura makumi maviri mota dzakasiyana: unofarira mudhudhudhu, musanganisi wekongiri, rori remoto kana chikepe?
Tamba pamwe chete! Multiple mota dzinogona kudzorwa panguva imwe chete pasina dambudziko.
Motokari yega yega ine mabasa akasiyana: inotakura zvinhu mutiraki, inobatsira vanorwara neamburenzi nezvimwe zvakawanda.
Tamba chero zvaunoda, hapana miganho yenguva kana mitemo yakaoma.
Hapana mu-app kutenga kana wechitatu-bato kushambadzira.
Tsanangudzo yeMota dzaDr Panda
Kugadziriswa kwekupedzisira: 29 / 09 / 2015
Compatibility: Inoda iOS 6.0 kana gare gare uye inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod Kubata.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Dr. Panda's Cars, yemahara kwenguva yakati rebei
Huya pana Ignacio, teerera zvinonakidza maapuro, wanga uri mumachira kwemazuva mashoma… ini ndinopinda peji rino kungoona ako maapp mahara kwenguva yakati rebei… Ushingi
Iko hakuna zvakawanda zvekusarudza kubva. Ipa izvi kuyedza kuti uone kana ichiri kuwanikwa mahara
https://itunes.apple.com/es/app/instaweb-web-to-pdf-converter/id581643426?mt=8 Yaingotengeswa kwemaawa makumi maviri nemana chete asi ini handina kukwanisa kuinyora kare.
Japan Ratidza, inoshuvira Apple kuti ishandise OLED skrini